Ubuchwepheshe be-Semalt: Zingaki Amagama Ezindaweni Ongayidinga?
Abanikazi bebhizinisi bafuna njalo ukuvula amasu okuhlala phambiliukuncintisana nokuvikela imikhiqizo yabo. Njengoba i-e-commerce ikhula, amabhizinisi athembele kulezi zindlela manje kunanini ngaphambili. Umkhuba othileokuyinto okwamanje isakazeka kabanzi emakethe yukuthi abanikazi bewebhu bathengise zonke izinguqulo zamagama wesizinda zezimpahla zabo.
Kodwa mangaki amagama wesizinda ofuna ngempela ukuthuthukisa ukubonakala kwakho nokuvikela umkhiqizo wakho? Isazi esiholela phambili i-Semalt Amasevisi weDivaysi, uMax Max unikeza impendulo esheshayo kulo mbuzo.
Ukuthola amagama eziningana zezizinda kungasebenza njengefa noma umthwalo wemfanelo. Ukubamba ezininganaamagama wesizinda njengenzuzo ikuvumela ukuba uvikele amagama afanayo wesizinda kusuka ekusetshenzisweni komncintiswano wakho - مؤسسة نظافة في جدة. Ku-SEO umongo, futhi ikuvumela ukuba ube nefawonke ama-keywords angukhiye enhle. Ngenkathi lezi zinzuzo zingakunika inqenqemeni ku-intanethi, izikweletu zingase zibe khona.
Izizinda eziqondisa kabusha
Kusukela zonke izizinda zakho zizosetshenziselwa ukusetshenziswa, izinjini zokusesha zingazifakela phansiuzama ukugaxekile ngaleyo ndlela kuholele ezijezisweni ezinzima kuhlanganise nesimo esingavumelekile. Kulesi simo, ochwepheshe be-SEO batusa ukuhlanganisa yonke ibhizinisiamagama wesizinda kanye namasayithi ahlobene kwiwebhusayithi eyodwa eqinile. Lokhu kuhlanganisa amandla egama ngalinye lesizinda ukwakha igama elilodwa lesizinda esiqinileunamandla okwanele ukubeka inamba kakhulu kuyo yonke injini yokusesha engemthetho ngaphandle kokulimaza isigaba sangaphambilini. Ukuhlanganiswa kudinga kuphela ukusungula mayelanaUkuhlelwa kabusha okuqhubekayo okungu-300 okuvela ezizindeni zomthombo kuya kwesizinda esiyinhloko, umsebenzi owenziwe kalula ngumchwepheshe we-SEO wangempela noma umlawuli wewebhu.
Izixhumanisi eziphansi kakhulu
Wonke amagama wesizinda abhalisiwe athola izixhumanisi zekhwalithi ephansi ngezikhathi ezithile. Uma izixhumanisi ezinjalo zikhonaiqondiswe kabusha, idlulisela ngezimpawu eziphansi ezifanayo eziholela kwinhla engaphansi kwezinjini. Ukubhekana nalokhu, sebenzisa i-Majestic nomaIkhonsoli ye-Google Search ukuze ihlole futhi ikhule izixhumanisi zekhwalithi ephansi ngaphambi kokuqondisa kabusha. Ifayela lombhalo lilayishwe ngamagama wezixhumanisi zamakhwalithi aphansiilayishwe kwinjini yokusesha ukuqeda le nkinga.
Ngokuvamile, amagama amaningi wesizinda unayo izindleko ezengeziwe ozithandayokufakwe ngendlela yokukhokha imali evuselelwe minyaka yonke. Igama elilodwa lesizinda libiza phakathi kuka- $ 10-35 ukuqhuba ngonyaka ngaphandle kokufaka imali ezindlini zokugcina.Yandisa lokhu ngenani lamagama esizinda sakho futhi uzobheka inani elibiza kakhulu.
Ukuvikelwa Kwezimpawu Ngezindawo Eziningi
Ochwepheshe be-SEO baqinisekisa ukuthi ukuvikelwa komkhiqizo kungatholakala ngaphandle kokuthengaamagama amaningi wesizinda. Khumbula ukuthi ubunikazi besizinda kulandela imithetho eqinile futhi echazwe kahle. Isibonelo, uma unayo uphawu lokuthengisa oluthileigama lesizinda, ungakwazi empeleni ukuphikisana futhi uphinde uvuselele isizinda sakho uma elinye iqembu libhalisa elinye isizinda esihlanganisa uphawu lwakho lokuthengisa. Banguinqwaba yezithunywa zegama lesizinda kanye nochwepheshe abavela lapho nolwazi ku-Uniform Domain Name Impikiswano Yokuxazululwa Kwezingxabano Zomhlaba. Noma kunjalo, le nqubo ingakwazikhathazeka futhi isikhathi esiningi.
Thatha isikhathi sakho ngezenzo ze-SEO nokufaka uphawu. Njengoba kucatshangwe ngenhla, ukuphatha okuningiAmagama wesizinda angaba usizo esikhathini esifushane kodwa ebiza ngokuhamba kwesikhathi. Indlela engcono kakhulu yokugwema amaphutha ukuxhumana nabanolwazi Ochwepheshe be-SEO .